Ulondolozo lwemihla ngemihla kunye ngenyameko enkulu kudlala indima ebalulekileyo ukwandiswa kwexesha ukusebenza Equipments 'kunye nomgangatho iplanga lothuli. Ngoko ke, nceda wenze izinto zilandelayo kwimveliso yakho yemihla ngemihla kunye nokusetyenziswa.
1. Yongeza ze kwabatyabeka sawo rhoqo agcwele ngaphandle. (Olunjalo njengoko chain lokuqhuba)
2. Sula uthuli umphezulu mqengqeleki rhoqo kwaye ingakumbi ukusebenza phandle. Ukuba ngaba usebenzisa yona kwixesha elide, kufuneka kwabatyabeka umatshini kunye sawo kumphezulu mqengqeleki kwaye udinga ucoce ngayo xa usebenzisa ixesha elizayo.
3. Ukuba isixhobo awusebenzisi ixesha elide, kufuneka usebenzise iiplastiki ngelaphu okanye ezinye izinto layigubungela kanye nesaziso uphephe imvula kwaye lifumile, ingakumbi ibhokisi ilawula zombane
4. Cutting Ungongeza sawo ukuya kwiindawo apho kufuneka sawo nesicelo
5. Ngokuqhelekileyo ubheke kwisikhululo kubunzulu baphantsi komhlaba kunye nobungakanani ngeoli ngomatshini deceleration kufuneka ongezwe ngexesha xa ukunqongophala oyile ubungakanani
6.To ibhokisi electric izixhobo kunye yonke ikhokelela isihlanganisi iimeko, kufuneka uhlole ngokuqhelekileyo kwaye acoce uthuli.